Home Wararka Maxkamada ciidanka oo eedaysane C/Samad Ibraahim ku xukuntay 10-sano
Maxkamada ciidanka oo eedaysane C/Samad Ibraahim ku xukuntay 10-sano
Maxkamada ciidanka oo eedaysane C/Samad Ibraahim ku xukuntay 10-sano. Ninkaan ayaa lagu soo eedeyay in uu ka ka mid ahaa ururka argagaxida ee Daacish. Cabdisamad Ibraahi Cumar oo magiciisa Afgarashadu yahay Abuu-Cali oo xiray dabayaaqadii sanadkii ina dhaafay kamid ahaanshiyaha Daacish oo uu ka tirsanaa ilaa 2016, ayay Maxkamada Ciidamada qalabka sida ku xukuntay 10 sano xabsi ah.
Eeedaysanaha ayaa inuu tababaro kusoo qaatay meel lagu magacaabo Il iyo Camaaro, waxa uu kamid noqday koox jabhad ah oo arbushaad ka sameyso dhulka bari ee Puntaldn, wixii intaas ka dambeeyay kooxda ayaa go’aamisay in lagu daro qaybta warbaahinta oo loo diyaariyay in uu noqdo Muuqaal Duube.
Ninkaan oo lagu helay cadeymo ayaa Xafiiska Xeer Ilaalinta ka codsatay Maxkamadda k in lagu xukumo ciqaab adag maadaama Daacish ay Eedeysanaha u soo wakiilatay Qal-qal gelinta Amniga Muqdisho balse ay Ciidamada Amniga qabteen isaga oo ka soo degayo Garoonka Aadan-Cadde.
Maanta ayay Maxkamadda go’aan ka soo saartay, waxaana lagu xukumay Cabdisamad Ibraahim Cumar 10-sano oo xabsi ciidan ah sida uu u sheegay dhinacyada Dacwadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad Ee Ciidamada Qalabka Sida.